Björck: Waxaa dhici karta in Ulf Kristersson si sahlan lagu doorto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Björck, wasiirkii hore ee difaaca ee xisbiga Moderaterna. sawir: MAJA SUSLIN / TT
Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson
Ulf Kristersson, afhayeenka siyaasadda dhaqaalaha xisbiga Moderaterna. sawir: Claudio Bresciani/TT
Björck: Waxaa dhici karta in Ulf Kristersson si sahlan lagu doorto
La daabacay fredag 1 september 2017 kl 16.32
Wasiirkii hore difaaca ee xisbiga Moderaterna Anders Björck ayaa aamin-san in kursiga hoggaanka xisbigu loo sumadeeyey Ulf Kristersson.
Madaxa xil-dhibaannada baarlamanka ee xisbiga Socialdemokraterna (S) Anders Ygeman ayaa sheegay inuu ka walaac-san yahay in xisbiga Moderaterna uu doortay inuu ku socdo dhabbadii hore.
Inuu Ulf Kristersson qudhiisu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka hoggaanka xisbiga M, isaga oo afar laammo-goboleed ee xisbiguna soo ban cayimeen, waxay howshooda u sahleeysaa guddiga doorashada, sida uu aamin-san yahay Anders Björck. Intaa waxaa dheer in Elisabeth Svantesson, oo la filayey inay doorashada qayb ka noqoto ay taageertay.
-Waxay muujinaysaa inuu hoggaanka xisbiga M uu qaban doono, sida uu sheegay.
Siyaasaddii asal raaca ee Moderaterna
Anders Björck ayaa aamin-san inuu Ulf Kristersson u hor-seedi doono xisbiga siyaasaddiisii asal raaca ee xisbiga lagu yiqiin.
-Waana mid ey xubno badan oo xisbiga ka tir-sani rajeeyneyaan, sida uu sheegay inuu aamin-san yahay.
Siyaasadda asal raaca ee xisbiga Moderaterna ayuu Björck ula jeedaa iney ka mid yihiin siyaasadda difaaca oo la adkeeyo, loo janjeersado dhanka midigta – in aanu jirin xisbi ka mideey-san xisbiyada dalka ka jira – iyo in lagu adkeeyo xiriirka xisbiyada garabka midig ee Alliansen.
Waa in la caddeeyo xiriirka siyaasadeed ee xisbiga Sverigedemokraterna, oo aanay horay ugu guuleey-san hoggaamiyihii xilka iska casishay ee Anna Kinberg Batra, sida uu sheegay Björck.
-Waxaan aamin-sanahay Ulf Kristersson inuu warkiisu ka caddaan doono middaa, uuna ka dhaadhiciyo xisbiyada ey xulufada yihiin ee Alliansen.
Adelsohn oo ka gaabsaday
Hoggaamiyihii hore ee xisbiga Moderaterna Ulf Adelsohn wuxuu ka gaabsaday inuu ka faalloodo ku dhawaaqidda Ulf Kristersson, mar ay telefoonka ku gaartay hayadda wararka Sweden TT.
-Way wanaag-san tahay iney caddeeyaan iney u taagan yihiin doorashada, si loo ogaado. Si hab-socodka doorashaduna u noqoto dood furan, sida uu sheegay Ulf Adelsohn.
Anders Ygeman, oo dhowaantan ka degay xilkii wasiirka arrimmaha gudaha, fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka aawadeed ayaa sheegay inay u muuqato Ulf Kristersson inuu doonayo inuu ku socdo dhabbadii ay jeexday Kinberg Batra:
-Middaasina oo uu diyaar u yahay inuu taageero ka helo xisbiga SD si uu dawlad ku dhiso, sida uu sheegay.
Ulf Kristersson oo isku soo taagay hoggaanka xisbiga Moderaterna